ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုချို့တဲ့ဘဲစေ့စပ်သင်အောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဤနည်းဥပဒေအပေါင်းတို့အားလူသိများသည်, ဒါပေမယ့်အဘယျသို့ - မလုံခြုံလူတွေကိုသူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒများကိုစွန့်ခွာဖို့? ပင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှာဖွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်, ထိုလုပ်ဖို့မစဉ်းစားပါနဲ့။ အဓိကအရာ - သင်လိုအပ်သောအရာကိုဆုံးဖြတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်အလုပ်လုပ်စတင်ရန်။
self-ယုံကြည်မှု - ကဘာလဲ?
သငျသညျ Self-ယုံကြည်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဘယ်လိုသိလိုလျှင်, သင်ပထမဦးဆုံးဒီခံစားမှုသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျလက်တွေ့ကျကျဆိုအခြေအနေမှာ၎င်းတို့၏စွမ်းရည်ကိုအကဲဖြတ်နိုင်လျှင်သင်, သူတို့ရဲ့အစွမ်းအစ၌ယုံကြည်မှုရှိသည်။ ယုံကြည်မှုကလူသာမန် Self-ယုံကြည်မှုအဆင့် Self-လေးစားမှု, အသက်ရှင်ခြင်း၌မိမိတို့နေရာအရပ်၏အသိအမြင်လေ့ရှိပါတယ်။
သငျသညျအောင်မြင်ရန်ချင်ပါတယ်သောစေ့စပ်လိမ့်မယ်လို့ဘယ်သို့ဆိုမနိုင်လျှင်, နေ့စဉ်အသက်တာကနေစိတ်ကျေနပ်မှုမရကြဘူး, ဒါကြောင့်သင်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ကြောင်းဖွယ်ရှိသည်ကိုသင်ယင်း၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
သငျသညျ Self-ယုံကြည်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ဘယ်လို၏မေးခွန်းကိုအဖြေကိုရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်, ကသင့်ရဲ့ Self-လေးစားမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ သူကယ့်ကိုမတန်တဆသည်ဆိုပါကတညျ့ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအမြဲလုံလောက်စွာသူတို့ကိုယ်သူတို့အကဲဖြတ်ရန်ပါဘူး, မကြာခဏကျွန်တော်တို့ဟာပိုကောင်းလုပျနိုငျထင်ပေမယ့်လက်တွေ့ဘဝနှင့်အတူရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့အသိပညာနှင့်စွမ်းရည်၏မရှိခြင်းကိုရှာပါ။ ဒါကမကြာခဏလူတွေမြင့်မား Self-လေးစားမှုရှိသည်, ဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒါဟာမလိုအပ်ပါဘူး, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုတိုးတက်လာဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားပါ။ ဒါဟာ soberly သူတို့၏စွမ်းရည်များအကဲဖြတ်ရန်နှင့် Self-တိုးတက်မှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန် သာ. ကောင်း၏။
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစ၌မသေချာမရေရာ၏အကြောင်းရင်းများအများအပြားရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်စိတ်ဖိစီးမှုများအတွက်အပြစ်တင်အများစု။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်ယုံကြည်မှုပြန်ရောက်စေဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ဒါဟာသင်ဖြစ်ပျက်များတွင်မဆိုတာဝန်သယ်မကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာမခံဖို့လိုအပ် (သို့မဟုတ်သင့်ပခုံးပေါ်အပြစ်တင့်သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်) ။ အဘယ်ကြောင့်ထိုသို့ပြုမှအရေးကြီးသနည်း စိတ်ဖိစီးမှုကြုံနေရဆုတ်ယုတ်မှုနှငျ့ရငျဆိုငျရသောအခါသောကြောင့်, ငါတို့သည်တရားခံရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်သူတို့ကိုယ်သူတို့အပြစ်တင်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း - ကြွင်းသောအရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖြစ်သောကြောင့်သူတို့တစ်တွေအမှားလုပ်မပေးနိုင်ဘူး။ သငျသညျအစဉျအမွဲအပြစ်ရှိကြောင်းခံစားရလျှင်အဘယ်သို့, Self-ယုံကြည်မှုပြန်လည်ယျသလော ဒါကမှန်တယ်, ဘာမျှမကလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကအရာအားလုံးမထိန်းချုပ်နိုင်မနားလည်ရန်လေ့လာပါ။
သင်သိများစွာသောအောင်မြင်သောလူများ Self-ယုံကြည်မှု၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဘာတွေလုပ်နေလဲ? သူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်၌တည်၏။ ဆက်သွယ်သူ၏လမ်းအပေါ်တစ်ဦးယောက်ျား၏ကိုယ်ဟန်အနေအထားမှာလိုက်ရှာ, ကျောင်းမှာသူမျက်မှန်ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်စာသင်ခန်းထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းအရှုံးသမားခဲ့သည်ဟုဆိုဘူး။ ကောင်းပြီ, သငျသညျ Self-မှီခိုအောင်မြင်ရန်မည်သို့နားလည်? ဦးခေါင်းနှင့်ပခုံးအထက်နှင့်ရှေ့ဆက်အဆိုပါပခုံးပြားစေ, သင့်နောက်ကျောကိုဖြောင့်။ သင် (အကောင်းကင်ပြာလမရကြလိမ့်မည်, ကြောက်လန့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းငှါကြောင့်ထိုသို့ကြောင်း မှလွဲ. ) ချင်သောဘာမှအောင်မြင်ရန်နိုငျသညျ, ကိုယ့်ကိုကိုယ်သင်သည်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမတတ်နိုင်ကြောင်းသံသယမှခွင့်ပြုမထားပါနဲ့။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုမြှင့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? သဘာဝကျကျနေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်း။ တစ်ခုခုအောင်မြင်ရန်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်။ သင်အဝတ်ကိုဝယ်ယူသောအခါကောင်းစွာ, သူမ၏မေးဖို့တစ်ဦးလျှော့စျေးပေးရရှိသည်ထင်ပါသလား။ သငျသညျပျက်ကွက်ရင်တောင်အောင်ပွဲသင်တို့အပေါ်မှာအပြင်းအထန်တောင်းဆိုဝံ့ကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
လူအပေါင်းတို့သည်အောင်မြင်မှုများအဘို့ကိုယ်ကိုကိုယ်ချီးမွမ်းရန်လေ့လာပါ။ တောင်မှဤကဲ့သို့သောအဘို့ သူ့အဘို့အချို့အလုပ်လုပ်ဖို့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထံမှတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတစ်ခုကုမ္ပဏီတစ်ခုက "no" ဆိုတဲ့အဖြစ်သေးငယ်တဲ့ ..
သင် Self-ယုံကြည်မှုမြှင့်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြဘူးလျှင်အောင်မြင်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? သင်ရုံသင်အမှန်တကယ်လုံးကိုအကောင်းဆုံးကိုထိုက်အဘယ်သို့ထင်မကြာခဏဘာမှလုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ သင်ကောင်းစွာ-သတို့သားကိုကြည့်, အကောင်းတစ်ဦးပညာရေး, တစ်ဦးပညာသတိရှိသောစိတ်ကိုတစ်ဦးကြွယ်ဝသောအတွင်းစိတ်ကမ္ဘာကရှိသည်။ မည်သို့အမျိုးသမီးတစ်ဦးပိုကောင်းတဲ့အနေအထား, ကောင်းတစ်ဦးခင်ပွန်းတစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖို့အသက်တာ၏မထိုက်မတန်နိုင်သနည်း သငျသညျအခြို့သော parameters များကိုအလိုရှိသော strips တွေမရောက်ရှိပါဘူးခံစားရလျှင် Self-ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စေ့စပ်လိမ့်ဖြစ်လျှင်, Self-စောင့်ရှောက်မှုပိုမိုအာရုံစိုက်ဖို့ကိုစတင်ပါ။
သစ္စာဉာဏ်အလင်း - Myth ဟာသို့မဟုတ် Reality?
Glass ကို mosaic အသံအတိုးအကျယ်
ရေယုန်အမျိုးအစား 1 နဲ့ 2
အိမ်ထောင်ဖက်လက်ဖက်ရည် - အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပျက်ဆီး
မူလစာမျက်နှာထ - အရွက်အဝါရောင်ဖွင့်နှင့်ပယ်ကျကြ
အမျိုးသမီးတွေ 50 နှစ်တာဆင်မြန်း၏စတိုင်များ
ဘယ်ဟာပိုကောင်းဖြစ်ပါသည် - running သို့မဟုတ်လမ်းလျှောက်?